Posted by Kaung Kin Ko at 5:48 PM
“အချစ်အကြောင်းကို ဖွဲ့ လိုက်တိုင်း ကိုယ့်လက်ကိုယ် စိုးရိမ်တယ်။” ...တဲ့လား..!!
ကျမကတော့ ဖွဲ့ဖို့မပြောနဲ့ တွေးမိယုံလေးနဲ့တင် ကျရှုံးနေပြီးသားမို့ပါ....။
အချစ်ဆိုတာ တစ်ကယ်တမ်းတော့ ပဒိုင်းသီးများလား မသိနော်..!!
Bravo!. Good idea & poem. Keep it up my brother. We will encourage you forever.
Hi Brother, I love this poem!
အဲလောက် အချစ်ကို အသေးစိတ်ခြယ်မှုန်းတတ်တာ တကယ့်ကို အံ့မခန်းပါပဲ…
တခုတ်တရရေးပေးတဲ့အတွက်ရယ် သီတင်းကျွတ်အတွက်ရယ် မုန့် ဖိုးလေး ဒီမှာ ထားခဲ့ပြီနော်… ကျေးဇူးပါကဗျာဆရာရေ….
စိတ်တိုတယ်.. ပြောချင်ဘူး.. အဲလို အကုန်ရေးလိုက်တော့ ကျန်တဲ့သူတွေက ဘာရေးရတော့မှာလဲကွ.. ဟွန်းးး။
"အချစ်ဆိုတာ မပျောက်ချင်လို့ 
တမင်တကာ မွေးထားလိုက်တဲ့ အနာ
ဟာဗျာ.... ခင်ဗျာ သိပ်လွန်သွားပြီး.. အချစ်ကို ဒီလောက် အနက်ဖွင့်ပြတော့ ကျန်တဲ့ ဘလောဂ့်ဂါတွေ ဘာသွားရေးမတုန်း...။ (ဟား..ဟား အပျော်ပါဗျာ)
ဒီလောက် အဖွဲ့အနွဲ့ကောင်းတဲ့ ကဗျာဆရာကို “အချစ်ဆိုသည်မှာ” Tag ရေးခိုင်းတော့ လက်လန်အောင် ရေးပြတော့တာပေါ့ဗျာ..။ လေးစားပါတယ် ဆရာကောင်း၊ မထူးပါဘူး တစ်ခါတည်း အလေးပါပြုသွားလိုက်တယ်ဗျာ။ :)
တစ်ခုပဲဗျာ အဆုံးသတ် စကားလုံးလေးတွေ ရှာနိုင်တာ
အံ့သြတယ်။ ကောင်းတယ်ဗျိုးး။ :)
၀န်ခံစရာရှိပါတယ်။ ကျွန်တော့်အစ်ကို့ရဲ့ ကဗျာတွေစာတွေကို သူငယ်ချင်းတွေကို မျှဖူးပါတယ်။
အရမ်းကောင်းလွန်းလို့ပါ။ သူတို့ကို ဖတ်ဖူးစေချင်တယ်။သူငယ်ချင်းတွေကလည်း ကဗျာအရမ်းကြိုက်ကြတဲ့သူတွေမို့ပါ။ ကိုယ်ပျောက်မျက်မှန်တုန်းကလဲ ကျွန်တော်ဝေမျှခဲ့မိတယ်။ အစ်ကို့ရဲ့ ကဗျာတွေပို့ပေးတဲ့အခါ ကောင်းကင်ကို လို့ အောက်မှာ ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။ အမြဲတမ်းပါ။ ပြီးတော့ အစ်ကို့ရဲ့ ဘလော့ဂ်လိပ်စာကိုပါပေးပါတယ်။ နောက်ဆို ကိုယ့်ဘာသာသွားဖတ်လို့ရအောင်ပါ။
ကိုသူတော် စီဘောက်စ်မှာ ရေးထားသလို အစ်ကိုကဗျာတွေ အလွဲသုံးစားဖြစ်နေခဲ့ရင် အဲဒါ ကျွန်တော့်ကြောင့်များဖြစ်သွားမလား စိုးရိမ်မိတယ်။ ကျွန်တော်ပေးတုန်းက ကောင်းကင်ကို ရေးတယ်ဆိုတာ ပါပေမယ့် နောက်လူတွေက ရေးချင်မှ ရေးတော့မှာ ဆိုတာ ကျွန်တော် သတိမထားမိဘူး။။..နောက်ဆိုရင် လိပ်စာပေးပြီး ကိုယ်တိုင်ပဲ သွားဖတ်ခိုင်းပါ့မယ်။ ကျွန်တော့်ကြောင့်များသာဆိုရင် အစ်ကို့ကိုတောင်းပန်ပါတယ်။ ခွင့်လွှတ်ပါအစ်ကို။
I read your beautiful love poem. I applaud you SKY. Cheres
အဲလို ရေးမယ်မှန်းသိရင် စကတည်းက တက်ဂ် လိုက်ပါတယ်။
great, greaT, greAT, grEAT, gREAT, GREAT! :)
ကိုကောင်းကင်ကိုရဲ့ ကဗျာက အင်မတန် ပြောင်မြောက် ပါပေတယ်။ ထမင်းပြီးရင် အရေးအကြီးဆုံးသော အစာ ဆိုတာ တော်တော် မှန်တယ်။ အချစ်မျက်နှာ ကြည့်ပြီး ဗိုက်ဝနေတယ် ဆိုတာ ဟုတ်မှမဟုတ်ဘဲ။
ကိုကောင်းကင်ရဲ့ အချစ်ဆိုတဲ့ကဗျာလေးကို တော်တော်လေးကို ကျတော်နှစ်ချိုက်မိတယ်ဗျာ
(အချစ်ဆိုတာ ကြိတ်ပြီးတဲ့ အခါ အချိုကုန်သွားတတ်တဲ့ ကြံဖတ် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သံယောဇဉ်နဲ့ မြတ်နိုးတတ်ဖို့ တော့ လိုတယ်။) ဒီစာသားလေးက အရမ်းကိုမိုက်တယ်ဗျာ
အချစ်ဆိုတာ လူအလစ်ကိုစောင့်နေတဲ့ သူခိုးတဲ့ မိုက်တယ်ဗျာ ဒါပေါ့ ကောင်းကင်ကိုဆိုတား) “အချစ်အကြောင်းကို ဖွဲ့ လိုက်တိုင်း ကိုယ့်လက်ကိုယ် စိုးရိမ်တယ်။” . တဲ့ ဟုတ်လို့ လား တစ်ခါကျနော်တွေ့ ဖူးသလိုပဲ “ကိုယ့်ရဲ့ လမင်း ” ဆိုလား :P
ကျွန်တော့်အတွက်တော့ အနုးညံ့ဆုံးသော အမှား...း)
ရေးဖွဲထားလို့ ကဗျာလေးကို အထူးပင်
ကာလီကိုကောင်း လို့ ပြောရမလားတောင်မသိ။
နောက်ဆို ကိုကောင်း ဟစ်ပ်ဟော့ သီချင်းကိုယ်တိုင်ဆိုပြီး...
ခွေထုတ်ဖို့ ဘဲ လိုတော့တယ်ဗျ...။
ကောင်းလိုက်တဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ပဲ ကိုကောင်းကင်ကိုရယ်။ ရေးတတ်လိုက်တာ။ ဒီတစ်ကြောင်းလေးအကြိုက်ဆုံးပဲ။ " အချစ်ဆိုတာ မပျောက်ချင်လို့တမင်တကာ မွေးထားလိုက်တဲ့ အနာ " ဆိုတာ။
ကဗျာလေး အရမ်းကောင်းတယ် အကိုရေ...
အချစ်ဆိုတာကို အမျိုးမျိုး ဖွဲ့ဆိုပြသွားတာ ဘာပြောရမှန်း မသိတော့လောက်အောင်ပါပဲ ( ကောင်းလွန်းလို့ )။
ဒါနဲ့ ကိုဇူလိုင်ကြီးက အကို့ကို ဘာတွေပြောလို့လဲဟင် :P
Well Done....! Really well Done
ကောင်းလွန်းလို့ဘာပြောရမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး။ .............. ....
အချစ်အဘိဓမ္မာဆရာကြီး ကာလီကိုကောင်း ဘွဲ့နာမည်ခံ ကိုကင်းကောင်
ဒီထက်ကောင်းတဲ့ အချစ်ကဗျာရှိမယ်ဆိုရင်တောင် ဒီလောက် ကောင်းမယ်မထင် :)
အမွှမ်းတင်ရင် မီမယ်မထင်လို့ နှစ်ခါပြန်ဖတ်ပြီး ပြန်သွားပီ (photoshop လေးနဲ့ image လေးဖန်တီးပီး လျှောက်ဝေရင် ခွင့်ပြုမလားလေ)
ဆရာကောင်းက ကိုအောင်သာငယ်နဲ့ ကိုဖုန်းမြင့်တို့ ရေးပြီးတော့ လက်ကျန် ရှားပါးနေရတဲ့အထဲ ရှိသမျှ စကားလုံးတွေ သိမ်းကြုံးယူသွားတော့ ကဗျာကို လက်ရှောင်လိုက်ရတော့တယ်။
လက်ဖျားရော လက်ရင်းပါ ခါလောက်တယ်
အကိုကောင်းကင်ကိုရေ အခုမှရောက်ဖူးတာပါ။ အကိုဖွင့်ဆိုချက်က ရှေ.ကအကို၊အမတွေပြောသွားသလိုပဲ နောက်လူတွေ ရေးစရာမကျန်တော့လောက်အောင်ကို ပြည့်စုံတယ်ဗျာ။ နောက်လူတွေ အချစ်ဆိုတာသာ အတက်ခံလို.ကတော့ သေပြီဆရာပဲ။
အကိုက အချစ်တွေကို ဟစ်ကျူးနေတယ်...ကျနော်ကတော့
သိပ်ကောင်းတဲ့ ဖွဲ့နွဲ့မှုတွေကို ခံစားသွားပါတယ်ဗျာ...
အစ်ကိုရေ!... အချစ် ကို ဖွဲ့နွဲပုံလေး အရမ်းကောင်းတယ်ဗျာ.. အားပေးလျှက်
အယိုယိုး..... အချစ်ကို ဖွင့်တာနော် ပွင့်သွားတာပဲ။ ဒီကဗျာကို ဂျောက်ဂျက် သီချင်းဆိုသလို ဖတ်ကြည့်ဗျ အရသာ ပိုရှိတယ်။